Football Khabar » अल्कोयानोले ७० वर्षपछि रियल मड्रिडलाई हराउँदा …….
अल्कोयानोले ७० वर्षपछि रियल मड्रिडलाई हराउँदा …….
काठमाडौं, माघ ८
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड गत राति कोपा डेल रे फुटबलको अन्तिम ३२ मा पराजित भएर प्रतियोगिताबाट आउट भयो । रियललाई तेस्रो डिभिजनको टिम अल्कोयानोले २–१ ले हराउँदै प्रतियोगिताबाट आउट गरायो । ९० मिनेटपछिको ३० मिनेटको समयमा १० खेलाडीमा सीमित अल्कोयानोले गोल गर्दै रियल मड्रिडलाई नमिठो झट्का दियो ।
तेस्रो डिभिजनको अल्कोयोनासँग रियल ७० वर्षपछि पहिलोपटक पराजित भएको हो । यसअघि रियल सन् १९५१ मा सो टिमसँग ला लिगामा पराजित भएको थियो । अल्कोयोनाले अन्तिमपटक सन् १९५१ मा शीर्ष लिग ला लिगा खेलेको थियो ।
७० वर्षअघि अल्कोयानोले आफ्नो मैदानमा रियल मड्रिडलाई २–० ले हराएको थियो । त्यसबेला अल्कोयानोको घरेलु रंगशालामा मात्रै ५ हजार दर्शक अँट्थे । त्यसबेला अल्कोयानोसँग उसको घरमा ५ हजार दर्शकसामु पराजित भएपछि रियलको घरेलु मैदानमा त्यसपछिका २ खेलसम्म ठीक ५ हजारभन्दा दर्शक खेल हेर्न गएनन् ।
भर्खरै शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको टिमसँग लज्जास्पद हारपछि रियलका समर्थकले क्लबप्रति आक्रोश पोख्दै व्यंग्यात्मक रूपमा अल्कोयानोको मैदानमा जति दर्शकका सामु रियल हारेको थियो, त्यत्ति मात्रै दर्शक खेल हेर्न रंगशालामा पुगेका थिए, लगातार तीन खेलसम्म । अल्कोयानोले सो सिजन ला लिगा खेलेपछि ७० वर्षदेखि आजसम्म कहिल्यै पनि शीर्ष लिगमा फर्किन सकेको छैन । त्यसबेला ला लिगा खेलको अल्कोयानो अहिले तेस्रो डिभिजनमा छ । सो टिम ७० वर्षदेखि कहिले तेस्रो र कहिले दोस्रो डिभिजनमा तल–माथि गरिरहेको छ ।
यस्तो विगत भएको अल्कोयानोले गत राति रियललाई ७० वर्ष पुरानो घाउ सम्झिने गरी हारको चोट दियो । उसले रियललाई ७० वर्षअघि आफ्नै मैदानमा हराएको थियो । र, यसपटक पनि आफ्नै मैदानमा हरायो ।
प्रकाशित मिति ८ माघ २०७७, बिहीबार २१:५३
गोल्डेन बुट दौडमा लेवान्डोस्की धेरै अघि : कसको कति गोल ?
सर्वाधिक गोलमा रोनाल्डोलाई लुकाकुको टक्क्कर : यस्तो छ ताजा अवस्था
ला लिगामा बार्सिलोना–बिल्बाओ भिड्दै : एथ्लेटिकोको खेल पनि आजै
post no 1230
लुकाकु चम्किँदा इन्टर मिलानको फराकिलो जित
सिरी ए : सहज जित निकाल्दै युभेन्टस तेस्रो स्थानमा उक्लियो
प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले निकाल्यो लगातार आठौं जित
लेभान्टेले रियल मड्रिडलाई उसकै घरमा चखायो नमिठो हार
बार्यन म्युनिखले शानदार जित्दा डर्टमुन्डले निकाल्यो कमब्याक जित
‘सिङजोरी खेल्ने’ ज्लाटन र लुकाकुमाथि लाग्यो प्रतिबन्ध